Mabhidi epamba: ndezvipi izvo, zvinodiwa uye zvakanakira izvi | Ehupfumi Zvemari
Encarni Arcoya | | nzvimbo yekugara
Kurota kuve nemba chinhu chakakurumbira, kwete chete pakati pevaviri, asiwo pakati pevadiki, vanoda kuzvimiririra, kuve madzimambo nemambokadzi eimba yavo uye vaite chero zvavanoda. Asi isu hatisi kuzozvinyengera isu pachedu, izvo zvinofungidzira hupfumi hwenyika husingawanikwe nemunhu wese. Nechikonzero ichi, mabhidi epamba anogona kunge iri mhinduro yekuwana imba pamutengo "wekutenga", kureva kuti, pazasi peizvo zvinotaurwa nemusika.
Asi, Ndeapi mabhii epamba? Ndezvipi zvakanaka zvavanazvo? Vanofanira kuitiswa sei? Pane zvinokanganisa here? Izvi uye nezvimwe ndizvo zvaticha taura nezvazvo zvinotevera.
1 Ndeapi mabidi edzimba
2 Zvakanakira kubhida kumba
3 Icho hachisi chinhu chakakura kwazvo pamusoro pekutengesa zvivakwa
4 Izvo iwe zvaunofanirwa kuziva nezve real estate misika
5 Izvo zvinodiwa kuti uwane mabhidha epamba
6 Ndekupi kwekuziva nezve mafandesi epamba
Ndeapi mabidi edzimba
Mabhidha epamba, anozivikanwa zviri nani seyeti dzepamusha, maitiro ayo, nekuda kwenzira yekutonga, imba inoiswa kutengeswa kuitira kubhadhara zvikwereti zvinokweretwa, saka izvi zvinowanzo kuve nekuda kwekuti ivo vakaiswa mari (uye isina kubhadharwa) kana kudzoserwa nhaka. Mune mamwe mazwi, tiri kutaura nezvazvo dzimba dzino "bhadhara" zvikwereti zvakabatwa neanokwereta.
Parizvino, chero chivakwa chinogona kutengeswa chero bedzi chakapihwa kana kuitiswa mari, kuwedzera mukubatanidzwa nechikwereti chiri kutaurwa. Ndokunge, iwe unogona kuwana mafurati, nzvimbo yekutengesa, chalet, magaraji ...
Chinhu chakanaka ndechekuti izvi zvinowanzo buda nemutengo wakaderera zvakanyanya kupfuura musika, kunyangwe iwe uchifanira kungwarira sezvo tiri kutaura nezve mabidi epamba; Unogona kupa chimiro chezvaungabhadhare, asi vamwe vanhu vanogona kukwikwidza kumusoro uye kazhinji mukwikwidzi wepamusoro ndiye anotora "jackpot."
Zvakanakira kubhida kumba
Mushure meizvo zvataurwa pamusoro apa, hapana mubvunzo kuti mukana wakakura wekubhidha pamba zvirokwazvo ndiyo chokwadi chekuti ichaenda tenga pamutengo unogona kunge wakaderera pane mutengo wemusika. Muchokwadi, mune dzimwe nguva inogona kutorwa kunze kwazvo, zvishoma, kuwana nekutengesa, kwete chete kudzoreredza mari, asi zvimwe zvakawanda.
Imwe mukana isimba kuwana nharaunda kana nzvimbo dzine dzimba dzinodhura zvakanyanya, kana kuti hapana kuwanikwa kwemisha inotengeswa, unova mukana wekugara munzvimbo ine rukudzo kana kuwana imba munzvimbo idzodzo. Uye ndiani anoti imba inoti nzvimbo, garaji ...
Icho hachisi chinhu chakakura kwazvo pamusoro pekutengesa zvivakwa
Sezvo zvisiri zvese zviri 100% zvakanaka, mune zvemabhidi epamba panewo zvakashata zvaunofanirwa kufunga nezvazvo kuti uite sarudzo yekutora chikamu mune imwe kana kwete.
Chimwe chezvikanganiso chikuru chauinacho ndechekuti hauzove neruzivo nezve chivakwa. Mune mamwe mazwi, iwe uri kuenda kutenga bofu. Iwe haugone kuona zvemukati usati wabhida, uye hauzive kana paine mumwe munhu anogara chivakwa, kana aine zvikwereti nenharaunda yenharaunda. Iwe hautomboziva iwo mutengo wemusika (kunze kwekunge waita zvako wega tsvagiridzo). Dambudziko nderekuti mabhii mazhinji epamba anobuda munguva pfupi, izvo zvinoita kuti kutsvagisa kuome.
Imwe mhedzisiro yemisheni yekumba iri kuita kubhadhara mari yese yatakatara munguva "pfupi" yenguva, Naizvozvo, kana iwe usinayo, zvinogona kunetsa kuwana mari yaunoda, nekudaro uchirasikirwa nechikumbiro. Ndokusaka, kana uchitora chikamu, zvakakosha kuti zviitwe zvese zviitwe kuitira kana uchinyatsoda imba iyoyo.
Izvo iwe zvaunofanirwa kuziva nezve real estate misika
Kana iwe uchifarira kutora chikamu mumabhidi edzimba, unofanira kutanga waziva kuti rudzi urwu rwemusika runoshanda sei, nekuti hauzove uri wega; pachave nevamwe vazhinji vanozobhida dzimba idzodzo, uye vanogona kuve neruzivo (uye zvemari solvens) kupfuura iwe. Naizvozvo, akakosha mapoinzi ekufunga nezvayo anotevera:
Dzimba kana zvivakwa zvakajairika vachagara vachiuya kubva kumabhangi, akavabata, kungave kwekusabhadhara mogeji, kana yechikwereti chisina kugutsikana.
Kuti ugone kukwikwidza iwe unofanirwa kutora chikamu chekutora chikamu uye izvi zvinogona kuve zvakakwira zvakanyanya.
Tikiti iyoyo inongokupa mukana wekubhidha, asi ipapo uchafanirwa kuwana mari kuitira kuti "vavimbe" kuti kana ukatenga chimwe chinhu unozogona kuribhadhara.
Kana iwe ukasabhadhara izvo zvaunowana mubhidhi mukati memazuva makumi maviri, kwete chete iwe ucharasikirwa neicho bhidhi, asi iwe zvakare ucharasikirwa nedhipositi uye yekutanga mari iwe yawakaita.
Izvo zvinodiwa kuti uwane mabhidha epamba
Kuti ugone kutora chikamu mumabhidi edzimba zvakakosha kuti, kutanga kwezvose, iwe unyoreswe mune yeruzhinji portal yeHurumende Agency yeHurumende State Gazette. Kana usiri, zvichave zvakaoma kwazvo, kana zvisingaite, kuzviwana.
Pane ino peji iwe unogona zvakare kuwana zvese zvivakwa zviri kuzotengeswa.
Chimwe chinodikanwa chaunofanira kusangana nacho chiri ita dhipoziti inozokumbirwa kune yega chivakwa iwe chaunoda kutora chikamu. Uye, zvichienderana neiyo chivakwa, dhipoziti inosimbiswa iwe yaunofanirwa kusiya kuti ugone kuibhidha.
Kazhinji, kana iwe wakanyoreswa, uye chiri chinhu icho chero munhu wechisikigo kana wepamutemo anogona kuita, iwe unongofanirwa kusarudza zvivakwa zvaunofarira uye kuita zvinodiwa kuti ubhidhe, zvese mari yacho uyezve dhipoziti.
Kana iwe uri wepamusoro bhidhaiti, uchave nenguva yakatarwa yekubhadhara mari iyi mudare izvo zvinosara (sezvo dhipoziti ichizotarisirwa "yekutanga kupinda").
Kwokumhan'arate pamafandesi epamba
Kana, mushure meizvo isu takuudza iwe, iwe uchida kuenderera mberi, iwe unofanirwa kuziva kuti kumba mabidi anogona kuwanikwa parizvino online.
Zvechokwadi, mazhinji anoitirwa online nekuti zviri nyore kuwana uye inopa vateereri vakawanda (uye vanogona kutenga). Kune akawanda mapeji ewebhu anogona kukuzivisa iwe nezve maokisheni ari kuzoitwa, kunyangwe pamberi, kuitira kuti usarudze kutora chikamu kana kwete.
Kana izvo zvauri kutsvaga zviri zvekutarisana kumeso, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi hazvichaitwe nekuti zvakamisa vazhinji kutora chikamu. Nekudaro, parizvino zvese izvo zvinoitwa zviri kuburikidza neInternet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » nzvimbo yekugara » Mabhidi epamba
Kumbira hupenyu hwebasa: yemahara foni
Seal kumiswa nharembozha